Ny hoavin'ny fifandraisan'ny mpampiasa: Beyond Touchscreens | Martech Zone
Ity infographic avy amin'ny Miantsena Smart miresaka momba ny hoavin'ny interface interface mihoatra ny efijery. Angamba ilay interface mpampiasa mandroso indrindra ampiasaiko anio ny Apple Watch. Ny fampifangaroana ny multi-touch, pressure, bokotra ary ny dials dia sarotra. Ary amin'ny rantsan-tanako lehibe dia tsy fanandramana milamina foana izany. Faly aho amin'ny ho avy!
Ny fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny ho avy sy ny interface
Miantsena Smart mamaritra ny haitao sasany izay eo an-tampon'ny fiovan'ny fifandraisan'ny mpampiasa:
Holographs - Microsoft efa mandefa Hololens ary nanokatra ny interface interface. Elon Musk dia naneho fihetsiketsehana sasany ohatra amin'ny interface interface holographic ihany koa.
Diode fandefasana hazavana voajanahary (OLED) - Manana fisaka sy antonony miolakolaka isika ankehitriny, saingy hentitra kosa, eo amin'ny takelaka, solosaina finday ary efijery. Na izany aza, ny teknolojia OLED dia azo ampiasaina amin'ny interface interface. Alao an-tsaina ny ho avy izay matanjaka be toy ny solosaina finday rehetra ny findainao finday, ary afaka mipetrapetraka amin'ny fisotroana kafe ianao ary manala sarona ary mamelatra ny efijery misy anao 30 inch Na angamba natsofoka tao anaty akanjonao io!
Fifandraisana amin'ny onja - Nandritra ny taona maro, ny fikarohana ara-pahasalamana dia nifanaraka tamina rafitra rafi-pitatitra. Ny teknolojia fivarotan-tena farany, izay ampiasain'ny teknolojia fandefasana finday mahery, dia mamaly amin'ny hafainganam-pandeha mety amin'ny saina amin'ny fifandraisana mekanika. Fitaovana vaovao, toa Emotiv, ampiasao ny detection electroencephalography (EEG) hikitika ireo onjam-peo tena izy mba hifandraisana amin'ireo rindranasa ivelany.
Ny hany fampifandraisana na fifandraisan'ny mpampiasa izay inoako fa tsy tadiavin'ny infographic dia fanekena feo. Na dia efa lasa mahazatra aza io, ny ho avin'ny baiko am-peo dia ho lasa ambony lavitra atsy ho atsy.
Ary na dia androany aza, ny Amazon Echo Mahatalanjona tanteraka amin'ny fanekena ny baiko am-peo sy ny valiny marina. Raha ny fahitako azy dia tsara lavitra noho ny fanekena feo toa an'i Siri's Apple ity.
Tags: atidohafahitana ny onja amin'ny ati-dohaemotivholographinterface holographichololenstsainaoledDiode fandefasana hazavana voajanaharyefijery kasihinatouchscreensfifandraisan'ny mpampiasampampiasa fifandraisana